Bakhathazeke ngokungaqedwa kokwakhiwa kwezindlu | News24
Bakhathazeke ngokungaqedwa kokwakhiwa kwezindlu
ISITHOMBE : SITHUNYELWEUmholi wamakhansela e-DA kuMasipala wasoGwini uMnuz Leonard Ngcobo emi noNks Gasta Khwela waseNgcengesi ekhombisa indlu eyagcina ngokwakhiwa iphansi layo eminyakeni emibili eyedlule.
IQEMBU le-Democratic Alliance (DA) ngaphansi kukaMasipala waseMzumbe selizwakalise okukhulu ukukhathazeka ngokungaqedwa kokwakhiwa kwezindlu zomphakathi.
Lesikhalazo sivezwe ngumholi weqembu kwaMasipala woGu uMnuz Leonard Ngcobo othe lezi zindlu zagcina ngokuthi kwakhiwe isisekelo sazo (foundation)eminyakeni emibili eyedlule kodwa kwase kuma kanjalo.
Izindawo okuyizona okubonakala kugqoza kuzona ukuthi kuqedwe ukwakhiwa kubalwa iNgcengesi, iManyonga, Inkwazi, Uphongolo naseGumatane.
“Lezindlu selokhu zama ukwakhiwa ngonyaka ka-2015 asazi noma imali yazo isakhona yini noma kwenzakalani, kodwa kuze kube yimanje imiphakathi isalokhu ihleli ingazi noma liyasa noma liyashona,” kusho uMnuz Ngcobo.
UMapholoba uqhube wathi okubuhlungu kakhulu imindeni ehlalele ovalweni njengoba kubonakala nesimo sezulu siba sibi kakhulu kulezi zinsuku kanti nemizi yalabo abangakakhelwa kuze kube yimanje ayikho esimeni esigculisayo sokuba kungahlala kuyona abantu.
“Kukhona izalukwazi ezihlala nabazukulu eziquba ezindlini zorawondi, uma kungase kufike isiphepho noma izimvula ezinamandla lemindeni ingasala dengwane,” kubeka yena.
Uqhube wathi ngisho uMasipala waseMzumbe imbala awusho lutho ngalolu daba kanti noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu awusho lutho ngalolu daba.
“Sesibone kufanelekile ukuba sibhalele uNgqongqoshe walo mnyango uMnuz Ravi Pillay ukuze asicacisele ukuthi ngabe inkinga ikuphi ngokuthi kuqhutshekwe nokwakhiwa kwalezindlu ngoba asisayiboni inqubekela phambili,”kuqhuba uMnuz Ngcobo.
Uphinde waveza ukuthi kungenzeka ukuthi imali seyehlika ngemilenze kulabo abebenikezwe lomsebenzi wokwakha lezizindlu kanti lokho kungenza ukuba kungaqhutshekwa nomsebenzi wokuthuthukisa izimpilo zabantu.
“imiphakathi yasemakhaya isivele yamukele noma ngabe yisiphi isimo ngoba ayikwazi ukuzikhulumela, yingakho sithatha igxathu lokuba sibakhulumele ngoba bavele bamukele noma ngabe esiphi isimo noma singesihle,”kuphetha yena.